Liverpool oo ku biirtay loolanka loogu jiro Dusan Vlahovic | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Liverpool oo ku biirtay loolanka loogu jiro Dusan Vlahovic
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay ku biirtay loolanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka Fiorentina Dusan Vlahovic , kaasoo si weyn loola xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo Premier League.
21 jirkaan ayaa dhawaan iska diiday dalab qandaraas oo ka yimid La Viola, kuwaasi oo haatan diyaar u ah inay iibiyaan xiddigooda bisha Janaayo adduun dhan £ 76.5m (€ 90m).
Manchester City , Manchester United , Tottenham Hotspur iyo Arsenal ayaa dhamaantood lala xiriirinayay Vlahovic, si kastaba ha ahaatee Daily Mirror ayaa sheegtay in Liverpool ay tahay kooxdii ugu dambeysay ee muujisay xiisaha ay u qabto adeega weeraryahanka.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegeysa in kooxaha Serie A ee Juventus iyo AC Milan iyo sidoo kale kooxda heysata horyaalka La Liga ee Atletico Madrid ay dhammaantood la socdaan xaaladiisa.
Vlahovic ayaa weli waxaa uga harsan labo sano qandaraaskiisa haatan, laakiin isagoo diiday soo jeedintii ugu dambeysay ee Fiorentina si loo kordhiyo, xiddiga reer Serbia ayaa la filayaa inuu ka tago kooxda mid ka mid ah suuqa kala iibsiga ee soo socda.
Tan iyo markii uu kaga soo biiray Partizan 2018, weeraryahanka ayaa dhaliyay 35 gool 92 kulan oo uu u saftay tartamada oo dhan La Viola, oo ay ku jiraan lix gool sideed kulan ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Previous articleQatar iyo Imaaraadka Carabta oo isku soo dhowaanaya – Maxaa shalay dhacay?
Next articleKooxaha Premier League oo xiiseynaya Xidiga kooxda Bayer Leverkusen ee Florian Wirtz
Xiddiga Bayer Leverkusen Florian Wirtz ayaa lagu soo waramayaa inuu xiiso ka helayo kooxo badan oo Premier League ah, kuwaasoo ka fiirsan doona...